Ukuphupha isazisi Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukuba nesazisi sakho kubalulekile ebantwini ngeendlela ezininzi. Ngaphandle kwamaxwebhu angqina ngokusayina kunye nesitywina sokuba uyiloo nto uzithetha ngayo, awuyi kufika nandawoni kwihlabathi lanamhlanje: ubomi bobungcali, iinethiwekhi zentlalo, ishishini, imicimbi yezemali; akukho nto isebenza ngaphandle kobungqina besazisi, njengesatifikethi, esinye. Ipasipoti okanye iDNI. Kwindawo yeshishini, amakhadi eshishini nawo ahlala atshintshana: oku kuthetha ukuba omnye umntu unazo zonke iinkcukacha zonxibelelwano ezibalulekileyo xa uthi krwaqu.
Kodwa ukuqonda kunye nokuchazwa kwesazisi sakho kubalulekile kuphuhliso lwengqondo. Usana ekuqaleni aluziboni njengenxalenye ezimeleyo yehlabathi. Kodwa sele kwiinyanga zokuqala zobomi uqala ukufumanisa ukuba unakho ukuthanda kwakhe. Xa umntwana omncinci ebona ukubonakala kwakhe esipilini, uyaziqonda ukuba unguye; xa ndandilusana, oku kwakungeke kwenzeke.
"Ndingubani, yintoni eyenza ndihluke kwabanye?" Lo mbuzo ubaluleke kakhulu emntwini kangangokuba uninzi lwabaphengululi abavela kuluhlu olwahlukeneyo lwamacandelo bawujongile lo mbandela: izithandi zobulumko, amagcisa, iimbongi, oogqirha bengqondo, noochwephesha bengcali yezengqondo.
Iphupha apho ubunikazi bakho budlala khona bunokubonakala busoyikisa kakhulu. Unokuzifumana ungowasemzini okanye uzibuze ngokwakho. Ukutolikwa kwamaphupha kubalulekile ukuba uza kuvela ngaluphi uhlobo uphawu "lwamaphupha". Ngaba ligama okanye ubuso, ngaba bufiphele okanye bubonakala ngokucacileyo?
Kwisicatshulwa esilandelayo uya kufunda zonke izinto ezibalulekileyo zokutolika zomfanekiso wesazisi sephupha. Okokuqala, singathanda ukukwazisa ephupheni esihlala siphila ngalo: yesazisi esitsha ...
1 Uphawu lwephupha «Isazisi» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Ukufumana isazisi esitsha kwihlabathi lamaphupha-hayi indlela ekunomdla ngayo!
2 Uphawu lwephupha «isazisi» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «isazisi» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «isazisi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Isazisi» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Ukufumana isazisi esitsha kwihlabathi lamaphupha-hayi indlela ekunomdla ngayo!
Ukuba uyaliqonda iphupha lakho ngokujonga isazisi sakho ukuba unesazisi esitsha, oku kunokuthetha ukuba enyanisweni uyakulahlekelwa sithandwa sakho. Umntu oleleyo ekugqibeleni unokufumana indlela yokuphuma kwimeko ebonakala ingenathemba kwaye unokufikelela kwisiphumo esihle ngelixa evukile.
Nabani na ofumanisa amava ephupha ngokusebenzisa umlingane wakhe otshintshileyo ukuba ngequbuliso omnye umntu unomnqweno onyanisekileyo kubomi bokwenyani ukuze atshintshe into ngokusisiseko kwaye alinge ukuqala kwakhona.
Uphawu lwephupha «isazisi» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha «isazisi» lunakho ekutolikeni amaphupha uwedwa isiphumo yalatha ngaphandle kunye nendlela ozijonga ngayo. Ngokunokwenzeka iphupha liphakamisa umbuzo wokuba abanye bawubona njani kwaye ukuba lo mfanekiso uhambelana nombono wakho.
Ukuba ibonwa njengokufiphala ephupheni, uphawu lwephupha lunokubonisa ukuba lunobunikazi balo ukukhangela. Ukuphupha akucaci malunga nobuchule kunye neepropathi. Mhlawumbi kukho amagunya afihlakeleyo kwi-ego ongazange uwarhanele.
Kwitoliki yamaphupha, uphawu lwesazisi "isazisi" inokuba sisicelo sokuqala ukuqonda iimfuno zakho ngaphambi kokwenza isigqibo esibalulekileyo.
Uphawu lwephupha «isazisi» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, uphawu lwephupha "isazisi" sinokubonisa umnqweno wokuzazi. Ukuba iphupha licinga ukuzazisa ebusweni, oku kukuchazwa kwephupha umqondiso awumisileyo Iimpawu zomntu impikiswano.
Ngokukodwa xa ubuso bubonakala bujijekile ephupheni, kubandakanya uphawu lwephupha. Kubalulekileukuba ukuphupha ngokungazi kuyala kwaye kuyacinezela. Ekuchazeni amaphupha, ukubonakala kwesazisi sakho kunokuba sisimemo sokuzamkela nazo zonke izinto ezikhethekileyo. Kungenzeka ukuba i-subconscious iphinde ibonakalise ngephupha ukuba umntu kufuneka asebenze kwiimpawu ezithile kunye nobuthathaka.
Ngapha koko, uphawu lwesazisi 'isazisi' ekuchazeni iphupha sinokubhekisa kwi Uqwalaselo bonisa ukuphupha. Ukuba ubona ukubonakaliswa kwakho ephupheni kwaye ukwabizwa ngegama lakho, lo mfanekiso ungabonakaliyo wesazisi uhlala ubonakalisa into engento kunye nokuzithemba okugqithisileyo. Mhlawumbi iphupha aliziva livunyiwe ebomini kwaye lifumana ubunyani ngophawu lwephupha "isazisi."
Ukutolikwa kwamaphupha, imbono yobuqu bomntu inokubonisa uloyiko ilahleko ungubani Umphuphi kufuneka athathele ingqalelo ukuba ngaba ubomi abukhokelayo buyangqinelana nobuntu bakhe.
Uphawu lwephupha «isazisi» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, uphawu lwephupha "isazisi" ekuchazeni iphupha yinto enokwenzeka yokujongana neyona nto ingaphakathi kuthi.
Iphupha libhekisa kuloo nto Kern yokomoya kwaye unxibelelana ne Amandla ombane Apha, apho umphuphi efumana ulwazi olubalulekileyo lokukhula kwengqondo.